NepaliNews, मुख्य खबर, विशेष
यसो भन्दै २०÷२२ वर्षकी एक युवतीले बृद्ध हजुरबालाई सिट बाट उठाएको दृश्य आज चाँही देख्न नपरोस भगवान भन्दै बस चढेकी हुन्छु तरपनि प्रत्येकदिन सोही दृश्य देखिन्छ । अनि मनले भन्छ कठै तिम्रो महिला अधिकार । मलाइ अचम्म लाग्छ दिदिबहिनीहरुले यो कस्तो अधिकारको प्रयोग गरिरहनु भएको होला लौरी टेक्दै बस चढेका ति बुढा हजुरबालाई उठाएर आफु आनन्द संग सिटमा बस्दै महिला अधिकारको प्रयोग गर्न कसरी मनले मानेको होला ? मलाई अचेल डर लाग्न थालेको छ यसरी अवस्था नबुझी अधिकारको प्रयोग गर्दा थोरै बाँकी भएको मानवता पनि हराउदै जाने पो होकी ?
हो हाम्रो देशमा महिलाका हकहितका निम्ती थुप्रै अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ । तर सबै अधिकारहरु सहि तरिकाबाट प्रयोग भएको पाइदैन । अधिकार प्रयोग गर्ने निहुँमा यँहा मानवता हराउदै र विकृति फैलिएदै गएको छ । र महिलाहरुको स्तर उन्नतिका निम्ती बनाइएका अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार यस्ता छन् जस्ले महिलाहरु पुरुषको तुलनामा कमजोर हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ । जस्तै ः–बस तथा माइक्रोहरुमा महिलाको लागि भनेर छुट्टाएको महिला सिटले पनि महिलाहरु पुरुषको तुलनामा कमजोर हुन्छन् भन्ने बुझाउँछ । तर्सथ हामीले अधिकार प्रयोग गरिरहँदा हामी कहाँनिर हामी कमजोर ठहरिन्छौ र कहाँ निर मानवता हराएर विकृती फैलिदै आएको छ भनेर सोच्ने बेला आएको छ ।
रुपा सुनार र घरपेटी प्रकरणको अन्तरवार्ता चलिरहदा बिचैमा छिरेका पत्रकारसँग पुन्यको चर्काच(भिडियो हेर्नुस)र्की भनाभन
रुपा सुनार प्रक’रणको पर्दाफास